गेलको अगाडि सबै फेल! आइपीएलमा यसपटक तोडिएला यो रेकर्ड? - Everest Dainik - News from Nepal
गेलको अगाडि सबै फेल! आइपीएलमा यसपटक तोडिएला यो रेकर्ड?
काठमाडौं, चैत ९ । वेस्ट इन्डिजका चर्चित ब्याट्सम्यान क्रिस गेलले २०१३ मा इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल)मा एक खेलमा सर्बाधिक रन बनाउने रेकर्ड बनाएका थिए । त्यसबेला उनले पूणे वारियर्स विरुद्धको खेलमा रोयल च्यानेजर्स ब्यङ्लोर (आरसीबी) का लागि ६६ बलमा १७५ रनको शानदार पारी खेले । यो रेकर्ड बनेको ५ वर्ष पुगिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि कुनै ब्याट्सम्यानले अहिलेसम्म यो रेकर्ड तोड्न सकेका छैनन् । के १२औं संस्करणको आइपीएलमा गेलको यो रेकर्ड तोडिएला? यो रेकर्ड तोड्न सक्ने ब्याट्सम्यानको चर्चा पनि फेरि हुन थालिको छ । गेलको उक्त रेकर्ड तोड्नसक्ने ५ खेलाडी यी हुन सक्छन्–
याे पनि पढ्नुस आइपिएल क्रिकेट : धोनीको टिमसँग हार्‍यो विराटको टिम
विराट कोहलीः आइपीएलमा भारतीय क्रिकेट टोलीका कप्तान विराट कोहलीको प्रदर्शन हुने गर्छ । गत सिजनमा उनले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे । विराटले पूरा सिजन ४ अर्धशतकको मद्दतमा ५३० रन बनाए । यो वर्ष पनि उनी शानदार प्रदर्शन गरिरहेका छन् । विराटले यही लयलाई आइपीएलमा देखाउन सक्ने हो भने गेलको रेकर्ड तोडिन सक्छ ।
रोहित शर्माः भारतीय क्रिकेट टोलीका ओपनर रोहित पनि आइपीएलमा गेलले बनाएको रेकर्ड तोड्न सक्ने ब्याट्सम्यान हुन् । मुम्बई इन्डियन्स टोलीका कप्तानसमेत रहेका रोहितले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा कयौं पटक ठूलो स्कोर बनाएका छन् । उनकै नेतृत्वमा आइपीएलमा मुम्बईले तीन पटक उपाधि पनि जितिसकेको छ । रोहित भारतीय क्रिकेट टोलीका एक यस्ता ब्याट्सम्यान हुन् जसले टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा ४ शतक प्रहार गरेका छन् । यसले पनि प्रमाणित गर्न सक्छ उनले गेलको रेकर्ड तोड्न सक्छन् ।
याे पनि पढ्नुस आइपीएलः राजस्थानविरुद्ध गेलको शानदार अर्धशतक
क्रिस लिनः अष्ट्रेलियाका स्टार ब्याट्सम्यान क्रिस लिन पनि आइपीएलमा गेलको रेकर्ड तोड्न सक्ने खेलाडीको सूचीमा छन् । आइपीएल २०१६ मा उनले गुजरात लायन्सविरुद्ध ४१ बलमा ९३ रन प्रहार गरेका थिए । आइपीएलमा उनको स्ट्राइक रेट करिब १५८ छ ।
महेन्द्रसिंह धोनीः चेन्नई सुपर किंग्सका कप्तान धोनीले गत सिजनमा शानदार प्रदर्शन गरेका थिए । साथै, उनको टोलीले नै ११औं संस्करणको आइपीएल उपाधि जितेको थियो । गत सिजनमा धोनीले १५० बढीको स्ट्राइक रेटका साथ रन बनाएका थिए । यदि उनले गेलको रेकर्ड तोड्ने हो भने ब्याटिङ पोजिसन परिर्वतन गरेर प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
याे पनि पढ्नुस आइपीएलः बैंग्लोरको विकेट पतन शुरु, विराट–डीविलियर्स सस्तैमा आउट
ऋषभ पन्तः ऋषभले गत वर्षको आइपीएल सिजनमा शानदार प्रदर्शन रह्यो । उनले गत संस्करणमा एक शतक र पाँच अर्धशतक प्रहार गरेका थिए । आइपीएलमा ऋषभको उच्च स्कोर १२८ हो । आइपीएलमा उनको स्ट्राइक रेट १६२.७१ छ । यदि यो पटक पनि ऋषभ पन्तको प्रदर्शन शानदार रहने हो भने गेलको रेकर्ड तोडिन पनि सक्छ । ऋषभ दिल्ली क्यापिटल्सका विकेटकीपर एवं ब्याट्सम्यान हुन् ।
ट्याग्स: Chris Gayle, IPL